Amalungelo okusebenzisa i-Police Body-Worn Camera | Izixazululo ze-OMG
Esikhathini se-hyper-vigilance, amakhamera wezinhlobo zonke abe iso lesithathu bonke abalibonayo nabaliqophile. Omunye wokugcina ukujoyina amakhamera womzimba, aklanyelwe ukusetshenziswa kwamaphoyisa, ukubamba lokuziphatha kwabasebenzi kanye nesikhathi lapho kwenziwa khona ubugebengu. Kodwa-ke, ukusetshenziswa kwayo kudlulela nakwamanye amasimu wobungcweti ngisho nasembonini yezemfundo. Le boom ivula impikiswano entsha mayelana nokuningi noma ukungaphaphami kanye noshintsho ekuziphatheni okuhlobene.
Akungatshazwa ukuthi yiminyaka yempumelelo yamakhamera, ngaphesheya kwemfashini ye-selfie stick, ngokunyuka kwamakhamera wesenzo kanye neGoPro njengomkhiqizi omkhulu kunabo bonke; okuyizikhulu ezihlangene ezibuka isenzo samaphoyisa; izinhlelo zokusebenza zokusakaza zamahhala ezisakaza bukhoma wonke umuntu; noma amadivaysi aphezulu wokuphepha ngobuchwepheshe obonakalayo ebusweni. Izikhathi ezengeziwe zezimpilo zethu zithathwa yikhamera, ngakho-ke kuphakama imibuzo emisha yokuthi kusho ukuthini ukuhlala ngaphansi kokubhekwa yilokho iso lesithathu.
Ngokuqondile, amakhamera omzimba noma i-body cam amukelwe kahle emadolobheni amaningi, njengoba ethathwa njengethuluzi lokulawula nelokulwa namandla emaphoyiseni. Lawa ngamadivayisi amancane angenangqondo ahlanganiswe nomfaniswano we-ejenti ekuphakameni kwamahlombe, ukurekhoda ngokuqonda ngaphandle kokuphazamisa insizakalo yakho yansuku zonke. Bangakwazi ukuqopha ngokuqhubekayo, benethuba lokulayisha ngokuzenzekelayo amavidiyo efwini.
Ngenkathi ukulawula kwamaphoyisa nokusebenza kuvame kakhulu ukuba omuncu ezindaweni ezinobunzima, ividiyo isiphenduka usizo olukhulu ekuqinisekisweni komthetho. Uhlome ngomucu wokugqoka esifubeni, amakhamera wamaqhuqhuva ngosayizi we-walkie-talkie azovumela amaphoyisa kanye nabesilisa nabesilisa ukuba bahlunge ukungenelela kwabo bukhoma. Ama-degree we-360 anokulungiswa, ilensi yawo ebanzi engabamba noma yisiphi isigcawu, imini nobusuku, esiteshini samaphoyisa asebenzisa le divayisi ngokuya ngesimo. Ukuqedela inqwaba yezikhulu zethu, lawa makhamera manje anikela ngazo zonke izindlela zokucacisa amacala wokudelelwa futhi aqinisekise ukwethembeka kwama-ejenti ethu ngesikhathi sokuhlolwa nokuma. Izithombe nomsindo, oqoshiwe kumemori khadi, uyaxhashazwa ubuyiselwe esiteshini samaphoyisa kuma-CD-Roms. Lezi zonke izingcezu zobufakazi ezingasetshenziswa kumaminithi achaza amaqiniso futhi ezingondla inqubo ngezinzuzo ezifana-
Idivayisi ibuye ifake phakathi isoftware ekhethekile egcina futhi ibambe amarekhodi okurekhodiwe futhi ivimbele noma yiluphi uhlobo lokuguqulwa noma ukuguqulwa. Uma kwenzeka kunokwebiwa noma kulahleka, kuhlinzekwa nendlela yokukhiya. Bakuvumela ukuqoshwa ngokukhanya okuphansi nangaphansi kwezimo ezimbi kakhulu.
Inhloso icacile ngoba ivumela ukuthathwa kokubili kokuziphatha komenzeli - okufanele noma cha - nalapho ubugebengu benziwa. Kodwa-ke, lolu hlobo lwedivayisi alusizi kuphela emaphoyiseni. E-Asia, ngokwesibonelo, ukusetshenziswa kwayo kwabacimi bomlilo, onogada, abagada olwandle, ukulawulwa kwezilwane noma emkhakheni wezemfundo sekuyacatshangelwa, kuhlomisa abaqondisi kanye nabasizi bakathishanhloko ngamakhamera omzimba ngonyaka olandelayo wesikole ukubhalisa ubudlelwano babo nothisha futhi abafundi.
Amadivayisi avumela izinqubo zokuqopha ngesikhathi sangempela. Ngokushesha kwethulwa, idivaysi iqala ukuqopha futhi ayikwazi ukuqondiswa yisiphathimandla ngoba imininingwane ilayishwa kuphela ngesikhathi sokuphela kuphela, kwesinye sezikhungo zokuqoqa, lapho lapho sifika kudingeka ukubaxhumanisa bese uthayipha umsebenzisi kulokho esikrinini bakwazi ukulanda amafayela kusisekelo esisekelo futhi babheke kuqala lokho abakwenze kwesinye isikhathi, kepha abakwazi ukuguqula noma ukuwasusa.
Ngendlela efanayo, uhlelo lokusebenza luqopha unomphela amavidiyo e-HD agcwele (ngesikhathi sangempela), umsindo kanye ne-geolocation, okusho ukuthi ezikhungweni ezihlukile zokulawula bazokwazi ulwazi olujwayelekile mayelana nokuthi ngubani ophethe lona. Enye inzuzo ukusetshenziswa kwevidiyo njengobufakazi enkantolo.
Izinto zokwakha zedivayisi, okungezwe jikelele, zingumthwalo osindayo futhi azihambisani nokushaqeka, ngoba zenzelwe ukubekezelela izimo ezinzima zelanga namanzi ngaphandle kokwehluleka.
Amakhamera omzimba angasetshenziswa njengendlela yokuvikela. Lapho othile eba nolaka futhi etshelwa ukuthi uyarekhodwa noma ubona ikhamera, kuguqulela ekushintsheni kokuziphatha, Kuyisendlalelo esingeziwe sokuphepha. Futhi, ucwaningo lukhombisa ukuthi izakhamizi ziziphatha kangcono uma ziqoshwa.
Ividiyo yamakhamera igcinwa futhi ilawulwa nguMnyango Wamaphoyisa futhi igcinwe kwiseva evikelekile. Ngaphandle kwendleko yokuqala yokuthenga imishini izindleko zesikhathi eside zokugcina idatha yohlelo.
Ikakhulu, idatha yekhamera yomzimba ikhombise ukwehla kwezikhalazo ngokumelene nama-ejenti, kanye nokwehla okukhulu ekusetshenzisweni kwamandla yizikhulu. Ezinye zezinzuzo zamakhamera omzimba ezikhonjiswe ezweni nokuthi manje esizwa esivivinyweni sethu ukwanda kokusobala. Konke kuvinjwa ngevidiyo futhi uma izaziso zomphakathi kanye nesikhulu sezikwazi, wonke umuntu uziphatha kangcono.
Ividiyo iqoshwe ngombono wesikhulu futhi ithwebula ama-degree ayi-130. Njengoba ama-ejenti ahlukile evela enkundleni unama-engeli ahlukile.
Uphenyo lukhombisa ukuthi umhlaba onamakhamera amaningi wokuhlola kungenzeka, ube muhle futhi uphephe ngokwengeziwe. Kepha njengoba ukunikezwa kwezobuchwepheshe kukhula, maningi futhi amathuba okusebenzisa budedengu. Kulokhu kwenezelwa ukuguquguquka kwezici ezingokomthetho. Lokhu sekudale, ngokwesibonelo, ukufuthelana kwezimpikiswano ngokuthi amaphoyisa kufanele awasebenzise kanjani amakhamera uma engasetshenziswa noma kuphi, noma ukuthi acishe nini ukuqoshwa.
Njengoba lobu buchwepheshe buqhamukayo, akukho mithetho eqinile ekusetshenzisweni kwabo, ngakho-ke singavunyelwa ukuqoshwa okuqhubekayo nomaphi lapho siya khona, ngaphandle kokulawula ukuthi ubani ongabona lezo zithombe. Kodwa-ke, lesi simo singaba nomphumela ongalindelekile ekwakheni umphakathi obekezelela ngokwengeziwe. Futhi nokuthi sibonga kakhulu umsebenzi wabanye.
Amalungelo okusebenzisa i-Police Body-Worn Camera igcine ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4203 Ukubuka kwe-1 Namuhla